Ragga oo wajaha halistaan marka ay Kombiyuutar korkooda ku isticmaalaan (Digniin) - Aayaha
Home»CAAFIMAADKA»Ragga oo wajaha halistaan marka ay Kombiyuutar korkooda ku isticmaalaan (Digniin)
Cilmi baarayaasha jaamacadda New Yor ayaa soo bandhigay in ragga sida isdaba joogga ah korkooda ugu isticmaala Kumbiyuutarada Laabtoobka ah ay dhaawacaan wax soo saarkooda raganimo.
Sida ay shaaciyeen cilmi baarayaasha, marka uu ninka Laabtoobka saaro korkiisa waxaa sare u kaca heer kulka laabtoobka kaasoo saameeya wax soo saarka shahwada ninka ragga ah dhibaatana u geysta maqaarka.
Dr. Yefim Sheynkin, oo ah dhaqtarka hogaaminayay cilmi baaristaan ayaa hoosta ka xariiqay in heer kulka Laabtoobyada ay gaari karaan 70c, heer kulkaas oo ah mid si aad ah u dhaawacaya jiritaanka shahwada.
Waxa uu sheegay in heer kulka uu si aad ah ugu dhowyahay xaniinyahay isla markaana kuleeylka uu toos ugu dhacayo.
Waxaa jira 29 rag ah oo ay soo gaareen dhibaatooyin dhanka wax soo saarka shahwada ah kuwaas oo cilmi barista lagu wareystay.
Dhaqtarka ayaa sheegay in heer kulka xaniinyaha ninka ay sare u kacaaan 2.1C, marka uu ninka isticmaalo Laabtoobka gaar ahaan marka uu ku fadhiisto labadiisa boowdyood, isagoo sidoo kale sheegay in heer kulka dhex dhexaadka ah uu sare u kaco ilaa 2.6C taasoo dhibaato weyn u keeneysa xaniinyaha.